Madaxweyne Saalax oo cod soo duubay & wararkii ugu dambeeyey ee Yemen + Sawiro – SBC
Madaxweyne Saalax oo cod soo duubay & wararkii ugu dambeeyey ee Yemen + Sawiro
Madaxweynaha Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa khudbad cod ah oo soo duubay wuxuu kaga hadley caafimaadkiisa ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu ku dhaawacmey weeraro qaraxyo ah oo lagu weeraray xarunta madaxtooyada Yemen ee magaalada Sanca.
Cajalad maqal ah oo laga soo duubay Cali Cabdalla Saalax oo laga baahiyey telefishinka dawlada ayuu ku sheegay in uu caafimaad qabo oo uu ka badbaadey weerarkii maanta lagu soo qaaday xarunta madaxtooyada, isagoo sheegay in ay weerarkaasi waa sida hadalka uu u yiriye ay ku shahiideen 7 sarkaal, isagoo sheegay in ay ka dambeeyeen weerarkaasi maleeshiyada daacada u ah hogaamiyaha qabaa’il ee awooda badan Sadiq al-Ahmar
Madaafiic laga hagayey isgaariinta ayaa ku da’ay sida roobkii xarunta madaxtooyada gaar ahaan masjidka ku dhex yaal xaruntaasi halkaasi oo ay ku tukunayeen masuuliyiinta dawlada Yemen oo uu ka mid yahay Madaxweyne Saalax.
Weerarkaasi waxaa ku dhintey Imaamka Masjidka Sheikh Cali Mohsen al-Matari, iyo sadex ka mid ah ilaalada Madaxtooyada, waxaa sidoo kale waxaa ku dhawaacmey tiro ka mid ah masuuliyiinta dawlada Yemen, sida ay baahisay wakaalada wararka Yemen u faafisa ee SABA.
Sarkaal ka tirsan dawlada Yemen ayaa sheegay in madaxweynaha loo qaaday Isbitaalka wasaarada difaaca halkaasi oo lagu dabiibay dhaawacyo yar yar oo soo gaarey.
“Waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amaanka oo u taagan inay ka hortagaan kooxaha qaswadayaasha ah ee sharciga ka boodsan kuwaasi oo aanay waxba ka galin sheegashadooda la xiriirta inay yihiin dhalinta kacdoonka” ayuu ku yiri cajalada maqalka ah Madaxweyne Saalax.
Madaxweyne Saalax oo ku kaceen dadweynaha dalkiisa oo ka biyo diidsan in uu xukunka sii hayo isagoo haatan madaxtooyada fadhiya 33 sano, ilaa iyo bishii January waxaa sii kordhaya rabshadaha lagu diidan yahay xukunkiisa.
Kuxigeenka Ra’isalwasaaraha Yemen Cabdu Al Jandi ayaa beeniyey wararkii isa soo tarayey ee la xiriiray in madaxweyne Saalax uu dhintey “Majirto wax saameyn ah oo dhanka caafimaadkiisa uu ku yeeshay weerarkaasi waana uu bad qabaa waana uu caafimaad qabaa madaxweynuhu, waxaana la bilaabay baaritaanka la xiriira weerarkaasi” ayuu Ra’isalwasaare kuxigeenku yiri.
Dawlada Yemen ayaa ku eedeysay weeraradaasi duqeymaha inay ka dambeeyaan maleeshiyada daacada u ah hogaamiyaha qabaa’il Sheikh Sadiq al-Ahmar kaasi oo xoogagiisu ay hardan dagaal kula jiraan ciidamada dawlada.
“Ra’isalwasaaraha, Gudoomiyaha baarlamanka, iyo saraakiil ka tirsan dawlada oo salaada jimcaha ku tukunayey Masjidka madaxtooyada ku dhex yaal ayaa weerarkaasi ku dhaawacmey” sidaasi waxaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP Tareq al-Shami, oo ah afhayeenka xisbiga talada wadanka Yemen haya ee lagu magacaabo Golaha Shacabka.